URazer angabonisa 'i-smartphone' yabadlali bebhola ngoNovemba 1 | Iindaba zeGajethi
URazer yinkampani eyaziwayo ngokuhamba kwayo kwihlabathi liphela midlalo; Oko kukuthi, ilizwe leemidlalo zevidiyo zePC. Ukongeza ekubeni nekhathalogu yeelaptops zolu setyenziso, ikwangumenzi wezixhobo ezinjengebhodi yezitshixo, iimpuku okanye iihedfoni. Nangona kunjalo, Nge-1 kaNovemba, uRazer uza kuzisa iqela elitsha loo nto ayinanto yakwenza nomsebenzi wakhe.
NgoJanuwari walo nyaka, URazer uthathe umakhi we-Nextbit we-smartphone, umdali weRobin esekwe kwilifu. Izikrokro ziye zakhula kwaye i-CEO yeRazer ngokwakhe yagqabaza ukuba banomdla wokungena kwicandelo lezemidlalo elihambayo. Kwaye mhlawumbi eyona ndlela ingcono yokwenza ukubheja kwiselfowuni kugxilwe kuqheliselo lwe midlalo.
Ngokwenkampani uqobo, kwinyanga ezayo kaNovemba 1 uRazer uza kuzisa into entsha. Kwaye njengoko kunokubonwa kwitrayer ekhutshiweyo, ungabona umntu onesixhobo esincinci ezandleni zakhe. Ngokukwanjalo, kuyaziwa ukuba iinjongo kukubheja kwifowuni esekwe kwi-Android. Kwaye inyani kukuba iqonga libonelela ngenani elikhulu lezihloko zokudlala kwivenkile yalo kaGoogle Play.
Ukubheja kokuqala kulawulwa sisiphelo sendlela ngescreen esikhulu kunye nesisombululo sokusebenza esiphakamileyo. Kwakhona, ukuba kukho into efunwa ngabadlali, ilungile iaudiyo, ke kufanele ukuba ibe yenye yeendlela zokubheja ezikhuselekileyo zeRazer smartphone. Ngelixa, into ebalulekileyo iya kuba kukujonga ukuba ngaba inkampani ifuna ukubonelela ngolawulo lomzimba kwi-chassis. Okanye ukuba iya kuthengisa uhlobo oluthile lokufikelela kwangaphandle ukuze ikwazi ukudlala ngokulula ngakumbi.
Akuqinisekanga ukuba yi smart. Nangona kunjalo, URazer sele ephawule oko kwiinyanga ezidlulileyo bahambe indlela ende malunga noku. Kwaye konke enkosi ngentsebenziswano yamalungu eNetxbit. Yintoni ukubheja kwakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » URazer angabonisa 'i-smartphone' yabadlala ngoNovemba 1